काठमाडौँ. १९ पुस । बुधबारका दिन राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री कृपासुर शेर्पालगायतका अतिथिहरूद्वारा गायिका जुनी खालिङ राईको पहिलो गीति एल्बम ‘जुनी’ विमोचन गरियो ।
कार्यक्रममा गायिका लोचन भट्टराईले ‘गीत–संगीत मनोरञ्जनको साधन नभएर सभ्यता र संस्कृति’ भएको धारणा राखिन् । किरात राईका प्रतचलित लोकगीतमा विद्यावारिधि गरेका डा. भक्त राईले ‘जुनी’ एल्बमका गीतहरू अब्बल रहेको बताए ।
उनले लोकजीवन र लोकलयमा आधारित गीत–संगीत कालजयी रहने विचार व्यक्त गरे । गायक तथा संगीतकार कृष्णभक्त राई र गीतकार टीका चाम्लिङले विमोचित एल्बमका गीतहरूले श्रोताको मन छुने बताए ।